Ma ogtahay in Number Vin ku saabsan aad baabuur ama gaari waa ka badan farabadan jilayaasha loo isticmaalaa si loo ogaado in aad gaariga. Tirada Your VIN waa 17 lambar ka kooban xarfo iyo nambaro gaar ah gaariga in aad qabto ama aad ka fiirsaneysa inay wax gadashada. By sameeyo Lookup tirada VIN ah aad loo raad raaco karaa gaariga dib ugu soo halkaas oo markii la soo saaray iyo wax badan oo macluumaad dheeraad ah oo muhiim ah.
Tirada VIN Your on gaariga waa sida sawirka faraha si aadanuhu ah, ma laba gaadhi mid la mid ah leeyihiin. Waxaa laga yaabaa inaad la yaabay si aad u ogaato in kastoo aad gaariga halkan waa in Maraykanka waxaa laga yaabaa in lagu sameeyay Mexico, Kanada ama waxaa laga yaabaa xitaa jidka oo dhan soo rarey Japan, Germany, Korea ama dalal kale oo badan oo dunida ku baahsan.
Marka aad u tiro VIN ah (sidoo kale og sida warbixinta taariikhda auto ah) bixiyaha aad isticmaalayso si dhab ah aqrisan doonaa tirada VIN iyo aad u sheegto meesha gaariga la dhisay, kuwaas oo soo saaraha waa, inkale waxa uu leeyahay daaqadaha buuga ama awood handarraabbadeedii, size engine iyo nooca wixii la isugu gudbiyo. Sidoo kale, marka aad u Lookup tirada VIN ah waxa kale oo aad ka heli kartaa macluumaad dheeraad ah sida akhrinta iyo igmashada ka dhexeeyo milkiilayaasha, in ama aan baabuurka abid la xaday, haddii baabuurka weligii uu daad iyo dhaawac, iyo haddii ay jiraan wax yeero hadda la xiriira baabuur gaar ah. Xitaa waxaad ka heli kartaa haddii ay jirto deyn ah oo ku saabsan baabuurka, haddii ay abid la wareegi, ama haddii ay abid ayaa khasaare guud ee shirkadda caymiska.
Hubi My Number Vin
Haddaba sidaas daraaddeed waxaa laga yaabaa inaad naftaada waydiiso “sidee ayaan u hubiso aan tiro VIN”? Nasiib wanaag la internetka, waa si caddaalad ah u fududahay. Tallaabada ugu horreysa waa in ay u hesho Tirada VIN gaariga. Dhammaan baabuurta iyo baabuur ay leeyihiin VIN ka imprinted ku cad yar ee biraha ku dumisaan dhinaca darawallada in aad ka arki kartaa adigoo eegaya dhex hore ee muraayada hore. Waxaa intaa dheer, saarayaasha qaar ka mid ah sidoo kale tirada VIN ku saabsan gudaha albaabada, daboosho iyo mararka qaarkood sidoo kale ku dabool sagxad ah ama jirrid. Note muhiim ah: yaabo inaad ku aragtid on laba darfahoodii in tirada VIN ku Isku mid ma aha. Tani macnaheedu maaha in gaariga la xado. Waxaa laga yaabaa in lagu shil iyo shirkadda caymiska oo keliya loo oggol yahay qaybo isticmaalay in la dul dhigo gaariga halkii brand kuwo cusub. Si kastaba ha ahaatee, haddii aadan soo gaari guud ahaan iyo waxa uu leeyahay tiro VIN oo dhan kala duwan oo dhan darfahoodii, bet ugu wanaagsan waa in ay ka fogaadaan gaariga in si gaar ah.
Next waa mid fudud sida u socdaan si aad u computer oo ka socda online. Waxaa jira shirkado badan oo sumcad leh in ay bixiyaan jeeg VIN gaari. Raadi adeeg jeeg tirada VIN ah in youtrust ama saaxiibadaa ku talinaynaa oo si fudud u geli lambarka VIN ku riday sanduuqa ku habboon, waa in si sahlan. The jeeg VIN gabi ahaanba bilaash ah waxaa sida caadiga ah VIN gartaan qalabka aad siinaya macluumaad ah oo ku saabsan baabuur iyo qalab ka soo saaraha waxay yimaadeen iyagoo ah.
Haddii aad ah VIN free tirada raadinta oo sanadka idin tusin, iyo model iyo engine iyo macluumaad kale oo muhiim ah la sameeyo, waad sii wadi kartaa warbixin taariikhda baabuur buuxa oo daaha ka qaadi doonaan arrimo farsamo oo halis ah, dhibaatooyinka iyo igmashada, haddii gaariga uu ahaa shil oo sidaas.
By hubinta tirada VIN ah, waxa aad ku badbaadin karto waqti badan, madax-xanuun iyo murug. Dadka had iyo jeer ma sheegi doonaa runta marka ay timaado iibinta baabuur ay isticmaali. By sameeyo baaritaan tirada VIN ah, waxa ay ka dhigi karaan dhammaan farqiga u adduunka u dhexeeya isagoo gaari ku si fiican kuu adeegaynaa, ama baabuur in aad kharash maal yar iyo in aad jeclaan lahaa in aad takhaluso.
Raadi Cheap Vehicle Taariikhda Warbixinta Halkan